Dolce Gabbana 3 L'Imperatrice - Iphunga abadumile, athumba izinhliziyo hhayi intombazane. Bright, izinkanuko, okungavamile. Uthando lwakhe noma inzondo - akayena ongenandaba.
Ngo-2009, umhlaba wonke fashion house Dolce & Gabbana ukhiphe umugqa perfume Iphunga Anthology, ngokushesha yabakhanga eduze omphakathi. I Anthology kuhlanganisa novelties ezinhlanu elicwengiweyo: 18, Dolce Gabbana 3 l'Imperatrice, 10, 1, futhi 6. Run yaphumelela, futhi emgqeni kwenezelwa flavour xaxa 3: 11 la amandla, 21 le -gcwele, 14 la temperance. Yonke umugqa sidalwe njengoba amakha unisex okungukuthi angasebenzisa nge kokubili amadoda nabesifazane.
I ugqozi Domenico Dolce futhi Stefano Gabbana wakhonza njengephayona emphemeni of amakhadi of Tarot, okungukuthi Major Arcana. Siyabonga kubo, futhi weza ezweni amanzi amasha yangasese. Abaklami abasebenza brainchild of eminyakeni embalwa, acabange ngokusebenzisa yonke imininingwane ehilelekile, noma kungaba ibhodlela, emabhokisini noma izingxenye amakha.
ukunakwa okuningi linikwe umkhankaso wokukhangisa. Abantu namakha eziye baba onobuhle: oluyimfihlakalo Eva Herzigova, ububele Claudia Schiffer, uNowa othakazelisayo Mills, Fernando Fernans ongaqondakali, sultry Tyson Ballou futhi ihlazo ubuhle exotic uNawomi Campbell. Ukukhangisa abaze ukuzwa esingaphansi yena perfume toilette. Lokhu akusona isimanga, ngoba zonke izimenywa okudalwe imodeli nqunu. Ngokuya ngalolu hlelo, izinkanyezi igcinwe amabhodlela ngaphandle amalebula izandla, okuvumela izilaleli ukuqagela mayelana bangobani. Futhi-ke, yena, wavula ikhadi wabiza siliphunga ukuthi komculo. Bright, movie ekhumbulekayo ongenawo analogue emhlabeni kwamakha, okubangelwa isithakazelo esikhulu ezindabeni umugqa entsha perfume toilette. Ukuhlanganisa impumelelo ezikhishwe izithombe engengaphansi inkanuko.
Ukwakha ukukhangisa izithombe wakhethwa photographer abadumile Mario Testino, owakwazi ukudlulisela ukubaluleka amakhadi ngu osaziwayo omkhulu wokudlulisa imizwelo.
Ako walinda impumelelo enkulu. Kodwa, naphezu unenkululeko esibekiwe, isigaba eyinhloko abathengi abaningi kwakungabantu besifazane. Akanayo amanzi yangasese okungenani owodwa kusukela amaqoqo "Anthology amakha" kwaba alifaneleki. Ikakhulukazi esilindele izilaleli weza ezingezwakali "Moon" futhi "iNdlovukazi". Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, inzalo aqala ukufiphala. Ngemva kwalokho, wonke umugqa kunqanyulwe, ngoba akusizi off. Okuwukuphela lenzelwa Dolce Gabbana 3 l Imperatrice, okuyinto ziyaqhubeka zithela ngokukhethekile Russia. Lapha kulapho iphunga beat wonke amarekhodi yokuthengisa futhi iyaqhubeka iba phakathi phezulu 5 ithengiswe kakhulu.
"Black Panther" imfashini ekhetha 3 amakhadi Tarot letibambisene, kungcono Iphunga Anthology: l imperatrice 3 Dolce Gabbana. Nanguya isifazane, eheha abantu besilisa, uyakwazi ukushayela mad futhi bahlanganyele ukunakwa, ukunqoba kuphela eyodwa shanela of eyelashes. Iphunga okuhambisana ngokugcwele Incazelo imephu: He is kalula futhi akabashiyi ubani nandaba.
Simple emaphaketheni atehlukanisa: amnyama ezimhlophe, akukho pretentiousness futhi kunganambitheki. Okuqinile esobala ingilazi ibhodlela: izibalo zama-engela of imigqa kanye ifomu sikubeke. Futhi esikhanyayo, okuqukethwe elikhazimulayo, okuyinto, like a diamond, akudingi imvume ezengeziwe.
Iphunga ezimibalabala elinuka, ezingavamile. amanothi aphezulu avulekile namanzi ikiwi sweet and omuncu rhubarb, elimnandi pepper pink currants. Ngokuhamba kwesikhathi, bagcina kufakwe ukulele mncane jasmine nenhle, elikhanyayo ikhabe ukuqhuma freshness kanye nogqozi Cyclamen. Ngaphansi kwesithombe senqaba umuzwa ezinhle e-sandalwood, lemongrass Chinese Ukuthoma namanothi we-must. amanzi toilet Dolce Gabbana 3 l Imperatrice lihlotshaniswa ibhokisi izithelo amathonsi: kukhanga, uswidi elimnandi.
Perfume Dolce Gabbana 3 l Imperatrice Nokho wadala njengendlela unisex, okumenza limelelwa umuntu. Ziyakwazi isifazane kakhulu, kungekho sobala amanothi besilisa. Lokhu amakha uyozizwa njengomhubi owesifazane langempela, iNdlovukazi kweqiniso, ejwayele ayale ezinhliziyweni zabantu. loopback Esimile ocebile okuyoba ngichachambe zibuthuntu grey ekuphileni kwansuku zonke, ungabenza baqiniseke ukuthi amandla abo, ukuphoqa ukuthi siphakamise ikhanda lakho phezulu umamatheke. Nje zilch ambalwa kusuka isifutho ngokwanele ukuba ukugqoka "iNdlovukazi" usuku lonke. Mhlawumbe yingakho Dolce Gabbana 3 l Imperatrice ethandwa kangaka, kanti bonke abanye bakwazi ukusinda emgqeni crisis. Zikhethwe eseyintombazanyana kakhulu futhi omdala izintokazi uyazethemba futhi ukunambitheka omunye ofanele futhi kwezinye izigaba ubudala. On ngamunye kokuveza ngendlela yalo, kwakheka isithombe esiyingqayizivele, ngokulinganayo liyabonakala futhi engaqondakali esiyingqayizivele.
I kwamakha chain izitolo ungakwazi kalula ukuthenga l Imperatrice 3 Dolce Gabbana. Intengo kungase kubonakale ngempela high, kodwa ngeke kuqinisekise ukuthi uthenga original. Abahlukahlukene izitolo inthanethi ukunikeza ukunambitheka ngamanani ethengekayo, kodwa ezimweni eziningi kuba inkohliso sobala, ngisho yokuzenzisa ufana kancane embhalweni wokuqala: Curves kwakunemibhalo eqoshiwe cap we lowehlukile, ingasaphathwa izinga lamafutha. izingcweti zokudweba ukuthengisa ilitha amabhodlela, osho ukuthi lokhu iyona kakhulu futhi kuyinto ukunambitheka kweqiniso. Cha, kukhona, nakanjani, inkohliso nekhwalithi, isibonelo, kusukela UAE neGibithe, okuyizinto esitebeleni ngempela futhi efana inguqulo yasekuqaleni. Kodwa kungcono hhayi ukuba izifake engozini, ukugwema isibili esidabukisayo kwemali esetshenzisiwe kanye nokukhungatheka okuholela ngokuthenga. Uma wayefisa, omunye ungalinda isikhathi esifanele futhi ngokuthenga ezinhle Isaphulelo Dolce Gabbana 3 l Imperatrice. "Letual" futhi "Rive Gauche" ngokuvamile afeze izenzo ezehlukene ezihilela wokuthengisa kahle, "UMbusikazi" kanye.
l Imperatrice 3 Dolce Gabbana: Intengo
Izindleko ethengwa kakhulu ehlelweni elithile incike ivolumu ibhodlela kanye nokugcina kulo kuluthola. Futhi iyiphi inguqulo yokuqala, uya ukuthenga noma mbumbulu. Okwesibili, yebo, kuyoba ishibhile. Izitolo eziku-intanethi anikele ezisuka 1000 ruble 1500 100 ml. Nakuba samakha ezitolo ezinkulu imali enjalo ayinakukuthenga ngisho 50 ml. Izindleko esincane - ngokwesilinganiso kusuka 4000 RUB 100 ml - ruble 5800.
Indlela ukuhlukanisa mbumbulu kusukela Eau yasekuqaleni de toilette
Kwesinye isikhathi izinsolo aqala uma uthenga ngisho ezitolo ezithile. wena Yini kufanele sinake kwakungafanele abe "ujabule umnikazi" isifaniselo?
Funda isembozo ngokucophelela Dolce Gabbana 3 l Imperatrice. Ngokusho kwabantu, ushe manga, lawo ngamaphuzu ayinhloko esekelwe zimi kanje:
1. isikwele nge igama amakha phezu iphakethe ukudala imikhiqizo inkohliso angawodwa kakhulu. Kufanele kuphela aphume ashone kancane, ungagijimi netindzima letehlukene iso ngokushesha. Iqiniso lokuthi esigcawini ivolumu, woqobo, ungase ucabangele ukuthatha amanzi olunephunga elimnandi ezandleni.
2. I-logo ye-brand ye-D & G ezansi ngaphambili iphakethe kakhulu kancane convex. Lokhu kungabonakala kalula ihlolwe, kokuba izinhlamvu ngomunwe wakho.
3. Vula iphakheji. Ngemuva kungabikho amalebula angaphandle, ngaphandle izinsuku Ukwakheka, umakhi lokuphelelwa kwalo isikhathi.
4. Izinhlamvu ohlangothini reverse of the yokuqala akungqubuzani ngokucace abamnyama, kodwa kunalokho, graphite, matt.
5. Ngalesi amanzi yangasese ifilimu, okuyinto zihambisana emabhokisini is ethe njo ekupheleni ubuso, futhi lokhu kubonakala ngokucacile. On the elinegazi ivaliwe kuphela phezulu kanye phansi.
Njengoba sesifunde emabhokisini unganqikazi ukuhlola ibhodlela umhloli uqobo.
1. ilebula woqobo anamatheliswe ngokucophelela futhi ncamashi, uhlamvu akusho "umdanso" esihlokweni kufanele kube awekho amaphutha.
2. Ngomusa ukukuthinta ilebula ebhokisini, bese sicabangela pad wakho. Noma it were izimpawu black, isifaniselo phambi kwakho.
3. Nakani tube ngaphakathi isitsha. Esikhathini sokuqala Dolce Gabbana 3 l Imperatrice lihlale phansi. izinguqulo mbumbulu yamanzi amashubhu ngokuvamile emikhulu isitsha ubude ezinjalo ezincane abakhwabanisi bamshaya indiva.
4. Umbala Sprayer - omhlophe.
5. Enye caveat - isiphethu e mshini sishaye. Akufanele kube lubonakale. Lokhu kalula eliqinisekisiwe ngokuhlola entanyeni ibhodlela.
6. Mboza isitsha kunalokho esinzima nge evundlile slicing mncane, babe amakhophi ke eyenziwe ngepulasitiki ezishibhile futhi abushelelezi.
7. iphuzu Ayikho ezingabalulekile kangako - ubungako balokho okusamanzi egabheni. Okuningi akusho kangcono. amanzi yangasese Expensive akuyona wathela "zamehlo" ukushaya futhi sakwazi ukuphefumula iphunga. Ngakho-ke, uma uthenga izinguqulo yasekuqaleni ke ngezinye izikhathi kubonakala sengathi amakha akuyona dolili, njengoba ngezansi kwesiyingi ibhodlela.
8. Color Dolce Gabbana 3 l Imperatrice EDT ayilutho pink, akukho orange-ophuzi, coral noma Pinkish-purple. Futhi akazange aguquke kulokho.
Dolce Gabbana 3 l Imperatrice: Izibuyekezo
Bestseller kusukela fashion house Italy kwakhululwa luseyintandokazi. Nokho, impendulo kwaba ephikisana kakhulu. Abanye bakholelwa ukuthi ekahle perfume toilette version futhi ungakuguquli iminyaka eminingi. Ngokwe-abalandeli, kuba ophikelelayo, okukhulu, acacile futhi emnandi. Ubeka kwemizwa futhi kusiza ukuba azethembe. It kuyindlela enhle ukuze kuphelele emcimbini somcimbi, futhi nsuku zonke. Ugandelela ubufazi futhi Ukwanelisa inkanuko, ivusa temptress, ngesibindi kwakwakhiwa.
Ezinye wazi ukuthi amanzi yangasese kuyinto amantombazane ofanele kuphela unethemba ngubani asesabi uzizamele ukubukeka kwakho futhi ibe spotlight. Othile ecabanga umuntu yayo best nje brunettes, sizitshele ukuthi umuntu ngomfanekiso blonde ngeke isisindo amakha kuphela. Ngesinye isikhathi kukholakala ukuthi iphunga ubudala nabesifazane abadala kufanele afake. Nokho, lokhu akubavimbeli abasebancane kakhulu futhi amantombazane ukhulile abamthandayo ngokulinganayo, kungakhathaliseki izinwele umbala.
imibono engakhi abonisa kokuntengantenga kwezomnotho, kukhathazeka, ukuqashelwa futhi cloying ngokweqile. Ngokuthi eziwubala "compote" eduze asifanele nsuku zonke futhi ebhekene ngokungenangqondo ezibizayo. Kuyaqapheleka futhi ukuthi nephunga egabheni, blotter nomzimba awafani.
Kodwa ungakhohlwa truism: yimuphi ukunambitheka lomuntu ngamunye kuzodlalwa ngezindlela ezahlukene. Ongeke wazi ukuthi uphawula kuzoveza okukhanya uzokubusa lonke kwengoma.
Ubuhlalu kusukela bezimvu
Yini ukunikeza umngane iminyaka engu-20
Yini ukunikeza kuMqondisi ngoFebhuwari 23? Amacebo eziwusizo
Uyini transoms ngoba umnyango wezangaphakathi. Izinhlobo, osayizi, ukufakwa
Indlela ukulungiselela amanzi rose ekhaya? Tea rose: zokupheka amanzi rose wokugezela
Game FIFA 15 Izidingo zesistimu futhi Graphics. Ubuncane system for PC kanye Xbox 360
Zintathu Cathedral, Shchyolkovo: umlando kanye nezithombe
Indlela yokugqoka ingubo ngaphandle kwephethini?
Ihhotela "Cosmos", Yaroslavl: Igumbi incazelo, ukubuyekezwa